Qalabka Dayactirka Erayga. Soo-kabashada ereyga. Kabsado Faylasha DOC & DOCX.
DataNumen Word Repair waa ugu fiican Qalabka hagaajinta iyo soo kabashada ereyga adduunka. Waxay hagaajin kartaa dukumiintiyada Word doc & doc & khariban ama kharribmay oo soo ceshan kara inta ugu badan ee xogtaada intii suurtagal ah, taas oo yareyneysa luminta musuqmaasuqa faylka.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,631 cod)
maxaad DataNumen Word Repair?
Heerka soo-kabashada waa most shuruudaha muhiimka ah ee soo-kabashada Ereyga. Iyada oo ku saleysan tijaabooyinkayaga dhameystiran, DataNumen Word Repair leeyahay heerka ugu wanaagsan ee soo kabashada, aad uga fiican tartamayaasha kale ee suuqa ku jira!
Baro wax badan oo ku saabsan sida DataNumen Word Repair sigaar cabaya tartanka
Ingineer injineer https://helpwithphysics.com
Oh my good, MAHADSANID! Ma rumaysan karo inaad awood u lahayd inaad wax ka beddesho! Waxaan macno ahaan isku dayay wax kasta oo kale- tani waa mid layaableh, oo anigu sidaas ayaan ahay
Sebtember 16th, 2015
Aad ayaan ugu qancay. Waxaan kugula talinayaa qof walba. Waan kuu rajeynayaa
Xalka Loogu Tala Galay Khaladaadka Caadiga Ah Sababtoo ah Dukumiintiga Erayga ee Musuqmaasuqa
Faylka xxxx.docx Lama Furi Karo Maadaama Dhibaatooyin Ka Jiraan Mawduucyada
Ereyga Waxaa Soo Muuqday Cilad Iskudayay Furitaanka Faylka
Faylasha Wadahadalka Beddelka ayaa soo ifbaxaya marka la furayo Dukumiinti Eray Khaldan
Sawirada laguma soo bandhigi karo dukumiintiyada erayga musuqmaasuqa ah
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen Word Repair v4.2
Taageero lagu dayactirayo Microsoft Word 6.0, 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 iyo Word for Office 365 dukumiinti.
Dukumiintiyada taageera ee ay soo saaraan Word for Windows iyo Mac.
Taageero soo kabashada qoraalka, sawirada iyo qaabeynta dukumiintiyada Word.
Taageero soo kabashada miisaska.
Taageero si aad uga soo ceshato liisaska bulsheed ama tirooyinka leh.
Taageero dib u soo kabashada qaabaynta iyo iskuxirashada
Taageero soo kabashada calaamadaha
Taageero si aad ugala soo baxdo dukumiintiga ereyga ereygarary faylal marka musiibo xogta dhacdo.
Taageer si aad u hagaajiso Word doc iyo faylasha docx ee warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo dayactiro qaybo ka mid ah Word doc iyo faylasha docx.
Taageero in la helo oo la xusho dukumiintiyada Word ee lagu dayactirayo kombuyuutarka maxalliga ah.
Taageerada isdhexgalka ee Windows Explorer, markaa waad ku hagaajin kartaa doc iyo faylka docx oo leh macnaha guud (guji midig) menu ee Windows Explorer si fudud.
Taageerada xariiqda taliska (DOS degdeg ah) xuduudaha hagaajinta faylasha Word.
Isticmaalka DataNumen Word Repair inuu ka soo ceshado Dukumiintiyada Erayga Khaldan
Markii dukumiintiyadaada (* .DOC iyo * .DOCX faylashaada) ay kharribmaan ama ay waxyeeloobaan oo aadan si caadi ah u furi karin, waad isticmaali kartaa DataNumen Word Repair si loo baaro feylasha ereyga loona soo kabsado xogta ugu badan ee suurtogalka ah.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan soo ceshan wixii fayl ah ee ereyga kharribmay ama waxyeeloobay DataNumen Word Repair, fadlan xir Microsoft Word iyo wixii kale ee codsi ee marin u heli kara faylka 'Word'.
Xulo feylka kharribmay ama dhaawacmay ee .doc / .docx faylka lagu hagaajinayo:
Waad gali kartaa magaca faylka Word .doc / .docx si toos ah ama waxaad riixi kartaa badhanka si aad u caleenta u xulato feylka. Waxa kale oo aad riixi kartaa badhanka si aad u hesho feylka lagu hagaajinayo kombiyuutarka deegaanka.
Marka la eego, DataNumen Word Repair wuxuu keydin doonaa feylka go'an ee Word sida xxxx_fixed.doc, halkaasoo xxxx uu yahay magaca isha Word .doc / .docx. Tusaale ahaan, ilaha ereyga ee loo yaqaan 'Damaged.docx', magaca asalka ah ee faylka go'an wuxuu noqon doonaa Damaged_fixed.doc. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Waxaad ku soo qori kartaa magaca faylka go'an si toos ah ama waxaad riixi kartaa badhanka si aad u caleenta u xulato feylka go'an.
Click ah Badhanka. DataNumen Word Repair doonaa start iskaanka iyo hagaajinta ilaha ereyga.
Nidaamka dayactirka ka dib, haddii faylka ereyga asalka ah si guul leh loo hagaajin karo, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale ah:
Hadda waxaad ku furi kartaa faylka ereyga ee go'an Microsoft Word ama barnaamijyo kale oo la jaan qaadi kara.
DataNumen Word Repair 3.7 waxaa la sii daayay Diseembar 12, 2020
DataNumen Word Repair 3.5 waxaa la sii daayay Nofeembar 2, 2020
DataNumen Word Repair 3.4 waxaa la sii daayay Nofeembar 4th, 2019
DataNumen Word Repair 3.3 waxaa la sii daayay Maajo 23th, 2019
DataNumen Word Repair 3.2 waxaa la sii daayay Maarso 14th, 2019
DataNumen Word Repair 3.1 waxaa la sii daayay Janaayo 21th, 2019
Erey Taageero 2019.
Hagaaji mishiinka baarista.
DataNumen Word Repair 3.0 waxaa la sii daayay Oktoobar 25th, 2018
Hagaajinta dib u soo kabashada tusmada.
DataNumen Word Repair 2.9 waxaa la sii daayay Ogosto 25th, 2018
Hagaajinta soo kabashada qoraalka.
DataNumen Word Repair 2.8 waxaa la sii daayay Luulyo 16th, 2018
Taageerada Word ee Xafiiska 365 dukumiinti.
DataNumen Word Repair 2.7 waxaa la sii daayay Janaayo 18th, 2018
Taageero inuu ka soo kabsado xog badan.
DataNumen Word Repair 2.6 waxaa la sii daayay Nofeembar 9th, 2017
Taageer Windows 10.
Xafiiska Taageerada 2016.
DataNumen Word Repair 2.5 ayaa la sii daayay 3-dii Julaay, 2015
DataNumen Word Repair 2.1 waxaa la sii daayay 20 Luulyo, 2013
Taageero gelinta sawirka dukumintiga la soo helay.
Taageer xarfaha Aasiya.
DataNumen Word Repair 2.0 waxaa la sii daayay 8 Juunyo 2013
Qaabka Taageerada erayga 2007, 2010 iyo 2013.
DataNumen Word Repair 1.1 waxaa la sii daayay 4 Juunyo 2005
Taageero lagu dayactirayo dukumiintiyada Microsoft Word 2003.